नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गरियोस् : अध्यक्ष शेर्पा-Setoghar
नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने कम्पनीको इजाजत खारेज गरियोस् : अध्यक्ष शेर्पा
भर्खर मात्रै काठमाडौं मदिरा व्यवसायी संघमा नया नेतृत्व चयन भएको छ । यस पटकको नेतृत्वले काठमाडौं जिल्लाका व्यवसायीहरुका समस्या सुन्ने मान्यता बमोजिम सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्यसमिति गठन गरेको छ । यसपटकको कार्यसमितिमा पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी अघिल्लो कार्यकालकै अध्यक्ष सोनाम शेर्पाले पाएका छन् । जोरपाटी स्थित शेर्पा लिकर्स तथा शेर्पा म्याक्स क्लबका सञ्चालक समेत रहेका सोनाम शेर्पा
सोनाम शेर्पा , अध्यक्ष, काठमाडौं मदिरा व्यवसायी संघ
एक जागरुक युवा उद्यमी पनि हुन् । लामो समय देखि मदिरा व्यवसायमा संलग्न उनले मदिराको व्यवस्थित बजारको निम्ति उनले विशेष पहल गर्दै आएका छन् । उनै शेर्पा सँग रहेर हामीले व्यवस्थित बजारको निम्ति गर्नुपर्ने पहल सम्बन्धमा कुराकानी गरेका थियौं ः
नेपालमा अहिले मदिरा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा मदिरा व्यवसाय विगतको तुलनामा निकै नै व्यवस्थित बन्दै गएको छ । अझै पनि बजारमा मदिरा व्यवसायको क्रममा केही समस्याहरु छन् । कम्पनीले नै नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेर मदिरा बजारमा पठाउने तर मदिरा सक्कली हो वा होइन भनेर चेकजाँच गर्ने साधन हामी व्यवसायीहरुसँग नहुने भएको कारण हामीले पछिल्लो समय निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । अहिले हामी काडमाडौं मदिरा व्यवसायी संघ अन्तरगत ती समस्याहरु समाधानको निम्ति संस्थागत रुपमा अघी बढ्ने निर्णय गरेका छौं । यसरी नक्कली स्टिकर राखेर मदिरा बजारमा पठाउने सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई इजाजत खारेज गरेर उनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपाल सरकार अन्तरगत सम्बन्धित निकायबाट हुनु जरुरी छ । यसो हुन सकेको खण्डमा बजारमा देखिएको समस्यालाई केही हद सम्म समाधान गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
नक्कली स्टिकर सम्बन्धित उद्योगले नै प्रयोग गर्नुको उद्धेश्य चाहिँ के रहेछ ?
बजारमा अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धा छ । उत्पादक कम्पनीहरु बीच पनि त्यसरी नै उच्च प्रतिष्पर्धा छ । जसले गर्दा सम्बन्धित उद्योग पनि छिटो र प्रयाप्त मुनाफा प्राप्त गर्ने लोभमा यसरी नक्कली स्टिकरमा मदिरा बजारमा पठाएको हामीले बुझेका छौं । यसरी कम्पनीबाट नै उत्पादित सामानमा नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नु अवैधानिक कार्य हो । साथै विक्रेता र व्यापारीलाई भने यस्ता मदिराको बारेमा कुनै जानकारी नै हुँदैन । तर अहिले बजारमा यस्ता समस्याबाट सबैभन्दा बढी व्यापारी नै पीडित छन् । तर बजारमा रहेका नक्कली स्टिकरहरुलाई बन्द गराउनको निम्ति नेपाल सरकारले अनुगमनको क्रममा व्यापारीलाई दुख दिने अवस्था आउनु हुँदैन । बजारमा आउने सामान कम्पनीबाट नै आउने हुनाले यसको निम्ति सम्बन्धित कम्पनीले नै कसरी सामान उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट नियमित अनुगमन हुनु जरुरी छ । कम्पनीको कारण बजारमा व्यवसायीहरु माथि कुनै समस्या आइपरे त्यसको निम्ति पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले नै लिनुपर्छ ।
अर्को कुरा कम्पनीबाट उत्पादित मदिरामा स्टिकर लगाउने काम आन्तरिक राजस्व कार्यालयकै प्रतिनिधिबाट हुने अवस्थामा पनि कसरी त्यस्ता नक्कली स्टिकर बजारमा आइरहेका छन् ? यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
यसको साथै घरायसी मदिराहरुले पनि बजारमा निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको अवस्था छ । यस्ता घरायसी मदिराहरुमा गुणस्तरीयता प्रमाणित गर्ने कुनै आधार नै हुँदैन । साथै यस्ता मदिराहरुले मानवीय स्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कुनै योगदान नहुने भएको कारण यस्ता मदिराहरु बन्द नै गरिनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौं ।
पछिल्लो समय मदिरा व्यवसायी संघ र महासंघ लगायतका संस्थाहरु त सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि अग्रसर भएको देखिन्छ नि ?
नेपालमा हामी अहिले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा पनि हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ । समाजलाई हामीले पनि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले विभिन्न क्रियाकलापहरु हामीले गर्दै आएका छौं । रक्तदान कार्यक्रम, भूकम्प तथा बाढी पीडितहरुको निम्ति राहत वितरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरु हामीले आयोजना गरेका छौं । अहिले देशैभरका मदिरा व्यवसायीहरु सामाजिक उत्तरदायित्वको निम्ति समेत काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागेको छ । हामी सोही बमोजिम यस्ता गतिविधिहरुमा सक्रिय रहँदै आएका छौं ।
मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौंको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले के कस्ता पहलहरु गर्दै आउनुभएको छ ?
नेपालमा सबै मदिराहरु एमआरपीमा नै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नको निम्ति हामीले संघ मातहत निकै कडाईको साथ प्रक्रिया अघी बढाएका छौं । म लामो समय देखि मदिरा व्यवसायमा संलग्न रहेको व्यक्ति पनि भएको कारण यस व्यवसायलाई नजिकबाट बुझेको छु । साथै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम आफ्नो व्यवसाय र सामाजिक गतिविधिहरुलाई सँगसँगै अघी बढाइरहेको छु । अहिले मदिरा व्यवसायी संघ काठमाडौंले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको छ । यसैकारण भर्खर मात्रै सम्पन्न हाम्रो यस संघको अधिवेसनबाट मलाई नयाँ कार्यसमितिमा समेत पुःन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अबको मेरो नेतृत्वको कार्यसमिति अन्तरगत हरेक व्यवसायीले एमआरपीमा विक्रीवितरण गर्ने, बिलविजक चुस्तदुरुस्त राख्ने, कम्पनीले दिएका सबै स्किमको लाभ व्यवसायीले लिन सक्ने वातावरण बनाउने,अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नगर्ने, भ्याटलाई भ्याट र प्यानलाई प्यानमा नै बिलिङको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायीबाट लिइने सदस्यता शुल्क रकम घटाएर धेरै सदस्यहरु बनाउने, सदस्यता शुल्क त्रैबार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने, इच्छुक व्यवसायीहरुको बिमाको व्यवस्था गरिने, लिकेज तथा ब्रिकेज साट्न तयार नहुने कम्पनीको विक्रीवितरण बन्द गरिने, कम्पनीको विदेश स्किम एग्रिमेन्ट भएअनुसार समयमा नै लैजानुपर्ने अर्थात ढिलाई गर्न नहुने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई दबाब दिने, नयाँ आउने उत्पादनहरुले अनिवार्य रुपमा संघलाई लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरु अघी सारेका छौं ।
अहिले यस संघमा सदस्यता विस्तारमा समेत निकै सहयोग पुगेको छ । यसको अलावा विगतमा आर्थिक रुपमा निकै कमजोर रहेको हाम्रो संघ अहिले आर्थिक रुपमा सबल समेत बन्दै गएको छ । साथै व्यवसायीहरुका थुप्रै समस्या समाधानको पहल गर्न सकेकोमा हामीलाई निकै गर्वको महसुस भएको छ ।
अन्त्यमा तपाईंले भन्नुपर्ने कुराहरु केही छन् कि ?
बजारमा कतिपय व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कम्पनीबाट सामान ल्याइसकेपछि उक्त सामानको रकम भुक्तानी गर्न तयार नहुने अवस्था पनि रहेकोमा अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्दै मदिरा व्यवसायीहरुको अलग पहिचान कायम गर्ने हिसाबले हामी काम गर्न सफल भएका छौं ।
अहिले हाम्रो यस संघले व्यवस्थित बजारको निम्ति गर्दै आएका कामहरु देखेर कम्पनीले बजारबाट उठ्न नसकेको ३–४ करोड बराबरको रकम भुक्तानीको पहल गरिदिन हामीलाई आह्वान गरेको अवस्था छ । हामी पनि सोही बमोजिम व्यवस्थित बजारको निम्ति विशेष पहल गर्दै आएका छौं । साथै आगामी दिनमा यस्ता खराब नियत भएका व्यवसायीहरुलाई कम्पनी मातहत डिलर, होलसेलबाट सामानहरु उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गराई कारबाही गर्ने योजना बनाएका छौं ।
साथै कर कार्यालय, उत्पादक कम्पनी, डिलर, होलसेल र व्यवसायी संघहरुको सामुहिक उपस्थितिमा वृहद अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा कर शिक्षा समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको अलावा तत्काल नै सरल भाषामा मदिरा कर ज्ञानमाला समेत प्रकाशन गर्दैछौं । यसले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई निकै ठूलो लाभ हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।